Ny Sandals Resorts dia manomboka amin'ny iraka maharitra 10,000-maharitra
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Ny Sandals Resorts dia manomboka amin'ny iraka maharitra 10,000-maharitra
Sandals Resorts International amin'ny alàlan'ny Sandals Foundation nankalazaina tamin'ny Andron'ny Tany ny asa hitondrana ny vahiny miaraka amin'ny ezaka ho an'ny fitohizan'ny tontolo iainana.
Sandals Resorts dia mampiakatra ny fanolorany tena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny tontolo an-dranomasina.
Ny Sandals Foundation dia manomboka iraka mihombo amin'ny fambolena voankazo, hazo ary ala honko 10,000 hiarovana ireo faritra terestrialy sy amorontsiraka manerana an'i Karaiba.
Ny fambolen-kazo dia fantatra ho hetsika azo ampiharina hanampiana amin'ny fanalefahana ny fandrahonana amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Tamin'ny Andron'ny Tany, ny Sandals Resorts International dia nanaja ny fanolorany tena maharitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy an-dranomasina amin'ny fankalazana ny asan'ny sandriny filantrropika, ny Sandals Foundation tsy mitady tombom-barotra izay manasongadina ny fifandraisan'ny mpitsidika sy ny mpitsidika.
Amin'ity taona ity, ny Sandals Foundation dia manomboka iraka mihombo amin'ny fambolena voankazo, hazo ary ala honko 10,000 hiarovana ireo faritra terestrialy sy amorontsiraka manerana an'i Karaiba.
Raha ny filazan'ny filoha lefitry ny SRI Adam Stewart, manam-pahaizana momba ny fifandraisana misy eo amin'ny fizahan-tany sy ny fiantraikany amin'ny toekarena eo an-toerana, ny fahombiazan'ny fizahan-tany sy ny fiveloman'ny olona Karaiba dia mifamatotra amin'ny fahasalaman'ny tontolo iainana. “Amin'ny maha firenena nosy kely antsika dia zava-dehibe ny fahafahantsika mitahiry sy miaro ny hatsarana ary koa ny famokarana ireo tanintsika. Izany no antony iarahanay miasa amin'ireo tantsaha sy mpanjono eo an-toerana amin'ny fomba hamaliana ny fangatahana; manangona, manofana ary manolotra fandrosoana amin'ny fanabeazana ho an'ny olona Karaiba izay ampanjifaina manokana amin'ny ho avy; ary maninona amin'ny Andron'ny Tany, ankalazaintsika ny asan'ny Fondation izay nanamora ny fahafahan'ireo izay mitsidika ny faritra misy antsika eto amin'izao tontolo izao, "hoy i Stewart.